Fohy DCN | Yunke China Information Technology Limited
Yunke China Information Technology Limited, amin'ny maha-zanaky ny Digital China (Orinasa orinasa) Group (Kaody stock: SZ000034), dia mpamatsy fitaovana fifandraisana ary mpanome vahaolana. Avy amin'i Lenovo, DCN dia natomboka tamin'ny tsenan'ny tamba-jotra tamin'ny taona 1997 niaraka tamin'ny filôzôfia an'ny orinasa "Client-oriented, Technology-driven and Service-prefer".
DCN dia mifantoka amin'ny sehatry ny serasera data miaraka amin'ny tsipika vokatra feno, ao anatin'izany ny Switch, Wireless, Router, firewall Security sy vavahady, serivisy, CPE ary serivisy Cloud. Miaraka amin'ny fitohizan'ny fampiasam-bola amin'ny R&D, DCN no mpamatsy vahaolana IPv6 voalohany, ny orinasa sinoa voalohany dia nahazo mari-pankasitrahana IPv6 Ready Gold ary ny mpanamboatra voalohany nahazo ny OpenFlow v1.3 Certificate.
DCN dia manome vokatra sy vahaolana amin'ireo firenena 60+ manerantany, ary nanangana ivon-toerana misolo tena sy serivisy serivisy ao amin'ny faritra CIS, Eropa, Azia, Amerika ary Moyen Orient. DCN dia manompo am-pahombiazana ny mpanjifa avy amin'ny Education, Government, Operators, ISP, Hospitality, ary SMB.
Miorina amin'ny fampandrosoana tsy miankina sy ny fanavaozana maharitra, DCN dia mitohy manome vahaolana amin'ny tambajotra miaraka amin'ny vokatra tambajotra manan-tsaina, azo antoka sy tafiditra ary serivisy kalitao ho an'ny mpanjifa.
Adiresy: No. 1068-3, Jimei North Avenue, Distrikan'i Jimei, Xiamen
Tambajotra IPv6 manamarina eran-tany an
Mandrosoa ireo foibe data center izay manohana ireo endri-javatra virtualization; Mandrosoa ny switch switch open ara-barotra voalohany ao Shina; Nomena ny tetikasa IPv6 fampisehoana CNGI an'ny Akademia Sinoa momba ny siansa;
Manome switch 1.2 ho an'ny tamba-jotra SDN ivon'ny tambajotran'ny Akademia Sinoa momba ny siansa; Mandrosoa ny tsipika famindrana foibe data
Mandrosoa ny famindrana foibe data data ho an'ny taranaka ho avy miaraka amina maritrano mihidy; Dcnos7.0 dia natomboka, ary ny vokatra rehetra dia manohana ny fivezivezena misokatra; Mandrosoa vahaolana azo ampiharina SDN ho an'izao rehetra izao
DCN dia nanatevin-daharana ny fikambanana onf tamina andiany tany Shina, no voalohany nandalo ny fanamarinana tsy miovaova amin'ny openflow 1.0
DCN no mpanamboatra trano voalohany nandalo ny fanamarinana mifanaraka amin'ny OpenFlow V1.3
Ny tontolon'ny volo manify indrindra eto an-tany DCN 802.11ac tontonana AP dia voatanisa ary tafapetraka tamim-pahombiazana ao amin'ny Zhongguancun National Independent Innovation Demonstration Zone
Ny orinasa dia nanangana karazana APS kilasy orinasa miorina amin'ny fenitra WAVE2 802.11ac; nanavao ny vokatra hafanana valo stream AP wl8200-i3 (R2) miverimberina telo hihaonana amin'ny tranga fahazoana miditra avo lenta;
Nampidirina ny seranana dolomite vaovao miorina ao amin'ny orinasa chip cs6570 100g avo lenta. Navoaka ny sehatra fitantanana Imcloud Intelligent Cloud v2.0, izay manohana
Niorina tamin'ny taona 2008, misy ny foiben-toerany any Beijing, nanangana ny sampana fanambaràna hetra any Beijing sy ny sampan'i Hong Kong izy. Amin'izao fotoana izao dia manana birao ao Changchun, Shenyang, Dalian, Zhengzhou, Hohhot, Shijiaz